I-Casa De Vita (umbono omangalisayo ogwini) - I-Airbnb
I-Casa De Vita (umbono omangalisayo ogwini)
Provincia di Lecce, Puglia, i-Italy
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Alessandro
U-Alessandro Ungumbungazi ovelele
Ikhaya leholide elihle elicwiliswe endaweni eluhlaza yaseSalento, eqhele ngamamitha angama-50. ukusuka olwandle kanye nokufinyelela okuqondile ukuchitha iholide lakho uphumule ngokuphelele emvelweni yaseSalento. Le ndawo isendaweni yangasese, iwusizo kulabo abathanda ukubalekela isiphithiphithi sedolobha kanye nokucindezeleka kwansuku zonke. Ikhaya leholide, elifakwe ngendlela yaseSalento, libheke iwa elihle laseTorre Nasparo, ohlangothini lwe-Adriatic lwePuglia.
Ukubuka kolwandle okuhle, i-panorama emnandi yabathandi bolwandle nemvelo. Indawo enhle kakhulu yokubhukuda olwandle noma ukuhamba ngezinyawo ezindleleni zePaki eduze nomgwaqo osogwini okhuphukela e-S. M. di Leuca. Futhi ilungele abathandi be-Trekking, i-Mountain Bike, ukuhamba izintaba nokugibela mahhala. Eduze kwechibi lokubhukuda lemvelo lase-Marina Serra di Tricase, elaziwa ngobuhle bayo yi-National Geographic, edume ngamanzi ayo acwebile kanye nemigede yakhona.
Lokhu cishe akulona izulu kodwa ungasondela esinyathelweni esisodwa. Leli khaya elihle lamaholide, ngesitayela sase-Salento futhi lizungezwe uhlaza lwe-Otranto-Santa Maria di Leuca Park, lingamamitha angama-50 nje ukusuka olwandle futhi linokufinyelela okuqondile ukuchitha iholide lakho uphumule ngokuphelele emvelweni. Lesi sakhiwo esikhulu, esibheke ulwandle, sisezingeni eliphansi elinamavulandi abheke eluhlaza okwesibhakabhaka, lapho isibhakabhaka nolwandle kuhlangana khona futhi izwe ukufinyelela kuzo lifushane futhi liyamukeleka. Ibheke iwa elihle laseTorre Nasparo, ogwini lwase-Adriatic eCapo di Leuca, elibizwa abantu basendulo ngokuthi "de finibus terrae". Ikhothamo eliluhlaza okwesibhakabhaka eliphambi kwakho likhulu futhi lingemuva kwakho, esikhundleni salokho, uyamangala ngamasimu ezihlahla zomnqumo, ezidatshulwe kanzima emvelweni. Ngezinsuku ezicacile nezicacile, uzothola ithuba lokuzwa udaka lwezintaba eziphuma olwandle: izintaba zase-Epirus, i-Albania yanamuhla, kuze kube manje futhi nokho eduze kakhulu kangangokuthi kubonakala sengathi kungenzeka ukuzithinta.
Namuhla ilanga, ulwandle namasiko kulindele izivakashi zalesi siqeshana esidlulele sase-Italy, lapho umhlaba uphela khona futhi uLwandle iMedithera luqala ngokuzimisela, olujikisa ukubheka kwalo kubheke eGreece naseMpumalanga Ephakathi. Mayelana 30 km kuya enyakatho, kukhona elinye iphuzu noma isiphongo, ukuthi we Otranto, lapho Italy Asondele nganoma iphuzu yayo extreme empumalanga, nge emabhishi ayo egolide akuzona ngengozi obizwa nangokuthi 'dei Turchi ", ingozi isikhathi manje kude . Labo abafuna bayoba nethuba lokucwiliswa ekukhaleni kogu oluphambene ne-Ionian, lapho iGallipoli, "idolobha elihle", ilindele abathandi bobusuku basehlobo.
Izivakashi zizoba nalo lonke ifulethi ezikhona. Siyohlale sikhona kunoma yisiphi isidingo esimayelana nendlu nezinkonzo zayo.
UAlessandro Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: LE07508691000012418
Hlola ezinye izinketho ezise- Provincia di Lecce namaphethelo